Sithini isicwangciso sakho soNxibelelwano lwangaphakathi? | Martech Zone
Sithini isicwangciso sakho soNxibelelwano lwangaphakathi?
NgoMvulo, Oktobha 20, 2008 NgeCawa, ngo-Novemba 25, 2012 Douglas Karr
Ividiyo eyonwabisayo ivuliwe izicwangciso zentengiso zangaphakathi. Ndihlala ndihlekisa nabantu ukuba umakhenika ulungisa imoto yakhe okokugqibela… Ndicinga ukuba umthengisi uhlala elibala ukubeka iimveliso kunye neenkonzo zabo ngaphakathi ngaphambi kokubeka igama!
tags: Isicwangciso sonxibelelwanounxibelelwano lwangaphakathiisicwangciso sonxibelelwano sangaphakathi
Iingcali zeMidiya yezeNtlalo kwiyadi yakho yangasemva!
Oktobha 21, 2008 ngo-12: 08 PM
Ingcebiso elungileyo. Abathengisi kufuneka bajonge ngaphakathi amaxesha amaninzi ukufumanisa ukuba ngaba amanyathelo abo anokubekwa eluntwini. Amaxesha amaninzi abathengisi babanjwa kakhulu kwinkqubo abalibala ukucinga ngayo yonke into.
Novemba 10, 2008 ngo-3: 28 PM
Ndiyithande ividiyo! Enye yezona mpazamo zinkulu zokuthengisa / ukuthengisa endikhe ndazibona kwikhondo lam lomsebenzi apho abasunguli babekhutshiwe bonke malunga nesicwangciso esitsha, kodwa boyisakala ngentengiso kubasebenzi. Okubi kakhulu kukuba abasunguli bengazange bayithengise le nkonzo, bebengenalo nofifi lokuba abathengi bayibona njani inkonzo kunye nophawu.
Ekupheleni kosuku, amaqela athengisayo ala (ewe- WALA) ukusebenzisa izinto zokuthengisa ezintsha kunye nesigama esitsha. Abaseki kwafuneka babuyele kwibhodi yokuzoba emva kokulahla yonke loo mali.
Ke # 1 kubandakanya abasebenzi bakho ekuyileni isicwangciso sentengiso, kuba bakwimigca engaphambili kwaye # 2 ukuba awukwazi ukuthengisa isicwangciso esitsha kubasebenzi, ngekhe ukwazi ukuwuthengisa kumthengi.
Iisenti zam ze-2 kuphela.
UApolinaras "Apollo" Sinkevicius
(Isuntswana lokuphinda uthumele, ushiye la magqabantshintshi kwindawo ephawuleyo kwividiyo)